Warshadda giraanta duuban ee Shiinaha iyo soosaarayaasha | Dongxing
Qaybta udhaxeysa ama kabaxsan jeexjeexka jirka ee duubista liiska duubista. Sida ku xusan booska kala geddisan ee giraanta duudduuban ee duubka, waxaa loo qaybin karaa giraan duudduub ah dhammaad iyo giraan dhexdhexaad ah.
1. U adkayso culeyska rogrogmada ee xoogga leh
Aagga dhexroor goynta of hayayaashii hore ee dhammayn rogid waa ilaa 50mm2, iyo aagga dhexroor goynta of pre-dhameystirka rogid waa ilaa 100mm2. Qaddarka intaa le'eg ee isbeddelka rogista wuxuu u baahan yahay xoog rogid ah oo boqolaal Newton ah. Birta guga, birta kubbadda iyo birta kale ee gaarka ah, xooggooda rogrogmada ayaa ka weyn.
2. Iska caabbinta soo noqnoqodka sare ee saameynta xoogga rogista
Jaangooyada ugu dambeysa V = 100m / s, qaadashada tusaalaha dhexroorka banaanka 170 tusaale ahaan, saameynta soo noqnoqodka F = 11240 jeer / daqiiqad. Haddii V = 80m / s, dhexroorka banaanka ee giraanta duubku waa 173 tusaale ahaan, f = 8836 jeer / daqiiqad.
3, hoostiisa asiidhyada kiimikada ee aashitada iyo alkaliinka
Maaddaama biyaha qaboojintu ay leeyihiin aashito iyo alkaliin qaarkood, falcelinta elektaroonigga ee giraanta duubista, oo ah falgalka unugyada 'galvanic cell', ayaa ka dhaca deegaankan. Natiijadu waxay qallajisay giraanta duubista. Heerkulka sare wuxuu sii kordhin doonaa falcelintan.
4. Adkaysi isku mid ah soo noqnoqoshada sare ee isku bedbeddelka saameynta kuleylka kuleylka
Ka dib marka giraanta la duubo oo lagu qaniino siligga kuleylka kulul, kuleylka laga soo wareejiyo ayaa la helaa. Ulaha iyo fiilooyinka ayaa markaa la qaboojiyaa. Farqiga heerkulka ee u dhexeeya dusha giraanta iyo lakabkiisa gudaha iyo hareeraheeda oo dhan waxaa sababa kala beddelashada kuleylka. Farqiga u dhexeeya ballaadhinta tooska ah ama foosha ee uu sababayo kala duwanaanshaha heerkulka ayaa keenaya kuleylka kuleylka. Sababtoo ah dhibic kasta oo dusha sare ee giraanta duubku waa la kululeeyaa oo lagu qaboojiyaa isbeddellada soo noqnoqda ee sarreeya, diiqada kuleylka ayaa sidoo kale saameyn ku yeelanaysa giraanta duubista ee is-beddelka soo noqnoqda badan. Natiijada isku beddelka shoogga kuleylka ee giraanta rullaluistemadka waa dildilaac daal kulul, oo ah sameynta dildilaaca digaagga caadiga ah.
5. Iska caabbinta xirashada xawaaraha sare iyo xoqida
Jeexdin is rogrogaya ayaa sidoo kale lagu soo rogay khilaaf xawaaraha sare iyo xirtaan halka giraanta rullaluistemadka la rogrogayo iyo giringiriyey usha xawaaraha sare iyo silig. Intaa waxaa dheer, jajabyada adag iyo miisaanka xabagta birta ah ee ku jira biyaha qaboojinta ayaa sidoo kale sababi doona nabaad guur iyo nabaad-guur.
1. Hubi in saxsanaanta mashiinka giraanta duubku uu hubiyo inuu buuxinayo shuruudaha sawirka.
2. Hubso tayada gudaha ee giraanta duubista, 100% iyada oo loo marayo baaritaanka aan burburin; Calaamadeynta giraanta duubku waxay u hoggaansameysaa xeerarka shirkaddaada waxayna ka fogaanaysaa arrimaha saameynaya isku dheelitirka firfircoonida.
3, hubi xasiloonida muddada-dheer ee tayada giraanta duubista, godad malaha, godadka ciidda, dildilaaca, ka-mid noqoshada iyo cilladaha kale ee tayada gudaha ah, isticmaalka caadiga ah ee giraanta duubku uma muuqato hilib, dildilaaca ifafaale duudduuban.
4. Hubso joogtaynta saamaynta giraanta duudduuban ee la keenay ee dhexroorka duudduuban ee shaqaynaya. Muddada dammaanadda tayada ee giraanta duubistu waa muddada wax-ku-oolka wareegsan ee giraanta shaqeyneysa.
5. Inta lagu guda jiro isticmaalka on-line ee giraanyada shirkadeena, waxaan sameyn doonaa raad raadin tayo leh si loo sii wanaajiyo tayada wax soo saarka. Haddii ay jiraan wax dhibaato ah oo tayo leh oo ku saabsan wicitaannada wax lagu duubo ee goobta ku yaal, waxaan ku siin doonnaa jawaab cayiman oo mas'uul ah 12 saacadood gudahood.
Hore: Si fiican loo qaabeeyey Xawaaraha Sare ee Tungsten Carbide Rollers - Carbide dunta duubka giraan - Dongxing
Xiga: Giraan carbide giraan duuban
Xaraashka dunta duubista dunta
Rullaluistemadka Tungsten Carbide, Duub Tungsten Carbide, Tungsten Carbide Roller Ring, Qaybta Mashiinka, Roll Carbide Cemented, Wareegyada Roll Mill,